Ọchịchọ ịmata ihe na akụkụ sayensị nke oge okpomọkụ nke San Miguel | Netwọk Mgbasa Ozi
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ ọ bụla, mgbe ngwụsị Septemba rutere, ọnọdụ okpomọkụ na-amalite ịda ada n'ihi mbata nke ụbịa. Agbanyeghị, n’ime izu nke Septemba 29, ọnọdụ okpomọkụ na-arị elu ọzọ. A maara nke a dị ka ndaeyo San Miguel. Ọ bụ izu nke okpomoku dị ka a ga-asị na anyị na-alaghachi n'oge ọkọchị.
N'isiokwu a ị ga-enwe ike ịmata ịmata ihe na akụkụ sayensị nke oge ọkọchị nke San Miguel. You chọrọ ịchọpụta ihe nzuzo ya niile?
1 Kedu mgbe oge ọkọchị nke San Miguel?
2 Gịnị mere o ji na-akpọ Quince Summer?
3 Enwere oge okpomọkụ nke San Miguel kwa afọ?
4 Nsogbu na oge ezumike ndị ọzọ
5 Okwu nke oge okpomọkụ San Miguel
Kedu mgbe oge ọkọchị nke San Miguel?
Mgbe oge ọkọchị malitere ịkwụsị, ọtụtụ ndị na-atụ egwu mmiri ndị a na okpomọkụ. Laghachi ọrụ, usoro na oge oyi. Oge okpomọkụ, temometa na-amalite ịda mgbe Septemba na-agagharị na oge ọdịda na-amalite. O sina dị, n’izu na-agwụcha Septemba 29N'ụbọchị San Miguel, ọnọdụ okpomọkụ na-ebili ọzọ dị ka a ga-asị na oge ọkọchị na-alaghachi.
N'oge okpomọkụ a, okpomọkụ ruru ogo 30 na Spain. Ọ dị ka a ga-asị na oge ọkọchị laghachiri ịsị ezigbo ruo afọ na-eso ya. Aha obere oge okpomọkụ a bụ n'ihi ememme ụbọchị San Miguel, na Septemba 29.
N’ebe ụfọdụ a maara ya dịka Veranillo del Membrillo ma ọ bụ Veranillo de los Arcángeles. Ma ọ bụ na ọ bụ obere oge nwere ezigbo obi ụtọ na-eme ka ntinye nke oyi na-atọ ụtọ. Bọchị ụfọdụ nke oge a nwere oke na ọnọdụ gburugburu ebe obibi anyị nwere n'oge ọkọchị. Agbanyeghị, ụbọchị ole na ole ka oge mgbụsị akwụkwọ jiri ikuku jụrụ oyi na-alaghachi.
Ọ na-emekarị na ngwụsị Septemba na mmalite Ọktọba. Oge a nke okpomọkụ dị elu anaghị aga ihe ọ bụla pụrụ iche. Ọ bụ mgbanwe ndị dị na mbara igwe na-akpata mmụba okpomọkụ na ihu igwe na-egbochi ihu igwe dị mma.
Gịnị mere o ji na-akpọ Quince Summer?
Anyị ekwuola na ọ na-enwetakwa aha a ma ọ bụ n'ihi na ụbọchị ndị a bụ mgbe quince na-ẹmende.
Oge nke oge a bụ ndị ndị ọrụ ugbo na-ezo aka n'oge owuwe ihe ubi nke ihe ubi a. Na mbụ, chi nwanyị nke ịhụnanya Aphrodite chebere quinins. N'ihi ya, a na-ekwu na quince bụ mkpụrụ nke ịhụnanya.
Enwere oge okpomọkụ nke San Miguel kwa afọ?
Obere oge ọkọchị a bụ ihe karịrị ikuku ikuku kwa afọ. N’ụbọchị ndị a, ọnọdụ okpomọkụ na-ebili ịnọ otu izu wee daa ọzọ. United States nwere ihe yiri nke ahụ akpọrọ Oge Ezumike India (Oge Ezumike India). Na mba ndị na-asụ German a na-akpọ ya Altweibersommer.
Kpọmkwem ihe yiri nke ahụ mere na mpaghara ndịda gburugburu June 24. Maka ha, oge oyi na-amalite n'oge a. Agbanyeghị, n'ihe dị ka ụbọchị San Juan, ọnọdụ okpomọkụ na-alaghachikwa dịtụ ntakịrị karịa nke ndị a. Ha na-akpọ oge a oge okpomọkụ nke San Juan.
Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ okwu gbasara ihu igwe, sayensị nwere ike ịkọwa ọtụtụ imerime okwu na nkwenkwe ndị a ma ama. Agbanyeghị, n'okwu a, ọ nweghị ihe mmụta sayensị iji kwado oge okpomọkụ a. Mana enwere ike ịkọwa ụfọdụ ihe kpatara ya.
N'oge mbubreyo Septemba, oge ọkọchị gọọmentị abịa na njedebe. N'oge a, mmetụta mbụ nke oge oyi amaliteworị ịmalite na ikuku. Ọ bụ oge dị oké mkpa n'etiti oge nke oge a na-ejikọ ụbọchị ụbọchị oyi na ụbọchị ọkụ. Ya mere, ọnọdụ mgbanwe na-ebutekarị ụbọchị ụfọdụ ezigbo ihu igwe mgbe mbido mbụ na ọnọdụ okpomọkụ na mgbụsị akwụkwọ.
Ọbụghị kwa afọ a ga-enwe oge ọkọchị nke San Miguel. Ọ bụ omume na-aga n'ihu kwa afọ, mana ọ gaghị eme.
Nsogbu na oge ezumike ndị ọzọ
E nwere ọtụtụ afọ nke oge ọkọchị nke San Miguel, mana ndị ọzọ anaghị adị. Omume ọzọ yiri nke a na ụbọchị dị nso na Nọvemba 11, ụbọchị a na-eme San Martín. Daysbọchị ndị a anyị na-ata ahụhụ otu "ikuku" ikpeazụ nke ọkọchị na ịrị elu na okpomọkụ. N'okwu a, ịrị elu anaghị arị elu dị ka oge ọkọchị, mana ọ na-echetara anyị karịa mmiri. Nwere ike ịsị na ọ bụ oge ọkọchị na-adọ anyị aka na ntị na ọ ga-alaghachikwute anyị n'oge na-adịghị anya ma na anyị nwere ndidi.
Na oge okpomọkụ ewere ọnọdụ ma ọ bụ na ọ bụghị ihe gbasara nke puru omume. Bọchị na-ekpo ọkụ na nke dị jụụ na-agbanwe nke ọma n'oge a dị ka oge opupu ihe ubi na oge mgbụsị akwụkwọ. A na-akpọ ha ya n'ihi na ha dabara na ụbọchị emume ndị nsọ.
Ọ bụrụ na anyị eleghachi anya azụ n’afọ ndị gara aga, anyị ga-ahụ na e nweela ọtụtụ afọ anyị na-enweghị oge ọkọchị nke San Miguel. Anyị nwere idei mmiri na Murcia na 1664 na 1919 (na ọnụ ọgụgụ nke ndị nwụrụ anwụ); na 1764 na Malaga, na 1791 na Valencia na 1858 na Cartagena. Na September 29 na 30, 1997, ajọ idei mmiri mere na Alicante
Na nso nso a bụ ide mmiri nke metụtara Lorca, Puerto Lumbreras, Malaga, Almería ma ọ bụ Alicante malite na Septemba 27 ruo 29, 2012, nke tara isi ọtụtụ mmadụ. Yabụ, anyị esoghị sayensị ụfọdụ nke ihe omume a kara ọkụ ga-eme kwa afọ.
Okwu nke oge okpomọkụ San Miguel
Dị ka anyị si mara, okwu a ma ama ọ bara ezigbo ọgaranya n’ihe ọ bụla metụtara ihu igwe na ihe ubi. Na nke a, okwu ndị a kacha mma amaokwu ụbọchị ndị a:
Maka San Miguel, nnukwu okpomọkụ, ọ ga-aba nnukwu uru.
N'oge okpomọkụ nke San Miguel enwere mkpụrụ osisi dị ka mmanụ a honeyụ
N’ọnwa Septemba, na ngwụcha ọnwa, okpomoku na-alọghachi ọzọ.
Maka San Miguel, nke mbụ ukpa, akpa ahụ mechara.
Oge ọkọchị nke San Miguel na-efu oke oge
Mkpụrụ niile dị mma na okpomọkụ maka San Miguel.
Site na ozi a, ị ga - enwe ike ịmụtakwu banyere obere oge anwụ anyị na - eji obi a celebrateụrị na - eme ọ inụ ihu n'oge ọdịda dị nso n'oge mgbụsị akwụkwọ na ọbịbịa nke oge oyi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Nkewa » Oge ọkọchị nke San Miguel